Izindaba - Ukuqamba okusha kumasevisi okuklama izingubo zangaphansi zabesifazane Ngokwezifiso
Ukuqamba okusha kwamasevisi edizayini yezingubo zangaphansi zabesifazane Ngokwezifiso
Ukuphila kufushane kakhulu kubhodisi ongakhululekile, ongathokozisi!
Umsunguli Wethu: Ubelokhu ethanda izicathulo, futhi uthemba ukuthi bonke abesifazane bangagqoka izithende eziphakeme ezilingana nezinyawo zabo futhi zibanike amandla engeziwe.Wasungula uhlobo oluzimele lokuklama izicathulo ngo-1998, wagxila ekucwaningeni indlela yokwenza izicathulo zabesifazane zesimanje ezinethezekile nezinemfashini.Wawuphula umhlangano wawuchaza kabusha.Ukuthola abesifazane ukuthi bagqoke izithende zakhe eziphakeme akusewona umsebenzi onzima.Ugqoke izithende eziphakeme ongabophekile kuzo, ngena ezulwini ngamaphupho akho.
Kodwa-ke, ufisa futhi ukuthi abesifazane bangazigqashula ezikhindini zangaphansi njengoba beneminyaka eminingi begqoke izingubo zangaphansi.Waze wacabanga ngomqondo othi "Wonke umuntu unezingubo zangaphansi eziklanyelwe" ukuze abone ukuthi wonke umuntu wesifazane ufanelwe yizingubo zakhe zangaphansi ezihlukile.
Lena indlela yokubonisa abesifazane abagcwele amandla, ama-sexy, futhi ababukekayo.Ukholelwa ukuthi i-sexy ayiphathelene nokujabulisa abanye, kodwa enye inkulumo yenkululeko.Uqale ukwakha uhlobo lwezingubo zangaphansi ngo-2004.
Unomthwalo wemfanelo ongaguquki, umgomo wokuthwala izinsimbi ezisindayo, umbono wekhasimende kuqala, kanye nesibopho sokuhlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende.
Uthi: besilokhu sithanda ukuklama nokuthunga , siyithanda ngempela inselele, siyakwazi ukuthunga ubhodisi othokomele ngempela naye okwenzekile wabukeka muhle.Ingxenye engcono kakhulu yayiwukuthi yenza amantombazane abukeke emuhle ngempela!
abantu nsuku zonke bras nsuku zonke.obhodisi abanethezekile, ama-Silhouette abeshelelezi, amajika ayemagophe, futhi ukugcwala kwakungaphandle kwamashadi!sesinebhizinisi iminyaka engaphezu kwe-10 futhi ingxenye esiyintandokazi ngakho konke kusewukuzethemba esikwazi ukukunika amakhasimende ethu.Abantu abasuka ezindaweni ezikude njengaseMelika nabasondelene nomakhelwane bafike bezozitholela ubhodisi owenziwe ngokwezifiso, onethezekile, ohehayo, owenzelwe ukukala, izintambo ezingalokothi zipokwe.
Isikhathi sokuthumela: Jul-27-2021